Ithelevishini yeApple TV + ekhutshwe yi "Finch" eneenkwenkwezi uTom Hanks | Ndisuka mac
Ngoku ungabukela i-trailer ye-Apple TV + bhanyabhanya "Finch" eneenkwenkwezi uTom Hanks
UToni Cortes | 21/09/2021 18:00 | Apple TV
I-premiere ye-movie entsha eneenkwenkwezi uTom Hanks yimpumelelo eqinisekileyo. Kwaye siyayibona leyokuqala kwiApple TV + ngenyanga kaNovemba. Iteyiphu enesihloko «Finch«, Kwaye ukuba ufuna ukwazi ukuba ithini le nto, ungabona i-trailer esemthethweni ukuba u-Apple uyikhuphile namhlanje kwi-akhawunti yayo ye-YouTube.
Ukuza evela Tom Hanks, iyelenqe lefilimu linokuba yiyo nantoni na, kuba le nto inye siyibona isenza njengendawo elahliweyo kwisiqithi esiyintlango, njengokapteni wenqanawa enqanawa okanye ijoni elifuna uRyan othile ... Ngeli xesha, into ukususela kwixesha elizayo ...
Enye yeefilimu ezikhutshwe kwi Apple TV + Uninzi olujongwa eqongeni ngokungathandabuzekiyo lube "yiGreyhound." Kungenxa yokuba umlinganiswa ophambili wefilimu wayenguTom Hanks. Ngaye, impumelelo iqinisekisiwe.
Nge-5 kaNovemba, i-Apple TV + iceba ukukhupha enye imovie entsha kunye nomlinganiswa omnye, ke ngoko, enye impumelelo eqinisekisiweyo. iteyipu enesihloko esithi "Finch." Ngeli xesha, uTom Hanks utshintshe inkwili ukusuka «Greyhound»Ukuzonwabisa kwikamva kwithuba elizayo le-apocalyptic.
Ibali lilula ngokulula: UHanks udlala umfana ogama linguFinch ohlala kwihlabathi elizayo. Kwifilimu, uFinch ukhangela ikhaya elitsha losapho, olunqabileyo: inerobhothi azenzele yona, kunye nenja ayithandayo «Goodyear«.
Ifilimu kwasekuqaleni yayenzelwe ukuba ikhutshwe ngu Yendalo, kwizikrini ezinkulu kwihlabathi liphela. Kodwa ngenxa yobhubhane owonwabileyo, njengoko kwenzekile nge "Greyhound", inkampani yemveliso igqibe ekubeni iyithengise kwelona bhidi liphezulu ukuze likhutshwe kwiqonga levidiyo.
I-Apple ithenge amalungelo, kwaye iya kuqala kwiqonga layo 5 ngoNovemba. Namhlanje i-trailer esemthethweni ikhutshwe kwiakhawunti yeApple ka YouTube.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » Ngoku ungabukela i-trailer ye-Apple TV + bhanyabhanya "Finch" eneenkwenkwezi uTom Hanks
Uxolo ngokungazi. Kwibhayisikobho yeGreyhound, ngaba yinkwili okanye uMtshabalalisi awongamelayo?
Isicelo sewebhu se-iCloud senziwe ngokutsha kuzo zonke izixhobo
Ukuhlaziya okanye ukufaka iMacOS Monterey entsha ukusuka ekuqaleni?